राजनीतिमा फेल भएकी छैन - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः श्रावण २३, २०७६ - साप्ताहिक
करिश्मा मानन्धरलाई लाग्यो, सिनेमा त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा । सिनेमाको पेसामा उनी जमिसकेकी छिन् । अब त उनले समाजका लागि काम गर्नुपर्छ । समाजका लागि प्रभावकारी काम गर्न राजनीतिमा लाग्नुलाई अपरिहार्य मानिन् करिश्माले । उनी डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक व्यक्तित्वबाट प्रभावित हुन थालेकी थिइन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले गरेका निर्णय, उनको कार्यशैली एवं विद्वताबाट प्रभावित थिइन् करिश्मा । हुन पनि बाबुराम माओवादी पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेता थिए ।
करिश्माले आफ्नो भूमिका खोजेपछि डा. भट्टराईका अनुचर र आसेपासेहरूले करिश्मामा पंचायती संस्कार कायमै रहेको आरोप लगाए । उनीहरूले करिश्मालाई ‘पदलोलुप’ भन्न समेत बाँकी राखेनन् । उनी पञ्चायतकालमा कहिल्यै कुनै गतिविधिमा लागेकी थिइनन् । त्यतिबेला उनलाई सिनेमाबाहेक अन्य विषयमा रुचि लिने फुर्सद पनि थिएन । करिश्माले देखेकी थिइन, पंचायती संस्कारले डा. भट्टराईलाई नै घेरेको थियो । उनी आफ्नो घर, परिवार, नाता–गोता, चर–अनुचरबाट घेरिएका थिए, तर पनि डा. बाबुरामसँग उनको अझै अपेक्षा छ । ‘अब उहाँ त धेरै पढेको, डाक्टरजस्तो मान्छे,’ किञ्चित व्यंग्यसहित उनी बताउँछिन् । करिश्मा एसईईमा उत्तीर्ण भएपछि डा. भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीले भनेकी थिइन्, ‘करिश्मा एसईईमा पास भए पनि राजनीतिमा फेल भइन् ।’ तर करिश्मा भन्छिन्, ‘म राजनीतिमा फेल भएकी छैन ।’